नेपाली सङ्घीय समाज अमेरिकाको महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा पुनः महर्जन - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
नेपाली सङ्घीय समाज, अमेरिकाको दोस्रो महाधिवेशनले समिर महर्जनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । जनवरी २७ मा न्यूयोर्कमा सम्पन्न समाजको महाधिवेशनबाट महर्जन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन् । समाज सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पार्टीको भातृ संस्थाको रुपमा अमेरिकामा सक्रिय रहेको छ ।
महाधिवेसनमा भाग लिन समाजका बिभिन्न च्याप्टर, उप समिति, केन्द्रीय समिति एवं सल्लाहकार समितिका प्रतिनिधी न्यूयोर्क आएका थिए । ‘जातिय मुक्तीको लागि संघियता, वर्गीय मुक्तीको लागि समाजवाद’भन्ने नाराका साथ सम्पन्न महाधिवेशनको प्रमुख अतिथी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सल्लाहकार प्रा. डा. महेन्द्र लावतीले दुईवटा मैन वत्ती बालेर उद्घाटन गरेका थिए । महाधिवेशनलाई सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एवं समाजका इन्चार्ज आङकाजी शेर्पाले पत्रमार्फत शुभकामना सन्देश पठाएका थिए ।
कार्यक्रममा न्यूयोर्क स्थित नेपाली कार्यवाहक महावाणिज्यदूत पुष्पराज भट्टराई, एनआरएनका पूर्व रिजनल कोअर्डिनेटर सोनामलामा, फिप्नाकाअध्यक्ष मानबहादुर रानामगर, एनआरएन अमेरिकाका महासचिव बिआर लामा, मधेशी एशोसिएसन अफ अमेरिकाका बरिष्ठउपाध्यक्ष सतेन्द्र शाह, एनआरएनए अमेरिकाका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय थापा, नेपालीजनसम्पर्क समितिका महासचिव मुनिन्द्र नेम्बाङ, प्रवासी नेपाली मञ्चका उपमहासचिव कृष्ण लामिछाने, जन मञ्चका अध्यक्ष अग्नी राई, पत्रकार शैलेश श्रेष्ठ, पूर्व सभासद् शान्ती जिरोल, समाजकी सल्लाहकार पार्वतीथापामगर लगायतले उपस्थितभएर शुभकामना दिएका थिए ।
समाजले अमेरिका स्थित नेपाली समाजमा सकारात्मक जागरणका लागि सदैव काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै नेपालको सघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन पहिचान सहितको संघीय राज्य निर्माणका लागि चालिएका हरेक सकारात्मक कदममा समाजको साथ रहने पनि जनाइएको छ । महाधिवेशसनबाट समाजका बरिष्ठ उपाध्यक्षमा लिला राई, उपाध्यक्ष द्धयमा ओमराज सम्बाहाम्फे एवं आङछिरिङ शेर्पा, महासचिवमा लोक चेम्जोङ, सचिवमा मनु लोहोरुङ, कोषाध्यक्षमा निलाज वेगु, सदस्यहरुमा अनिल लिम्बु, विमल चेम्जोङ, गजेन्द्र सुम्बा, जंबु लामा, देवबहादुर पुन, कुवेर वनेम, काजी शेर्पा, हरीप्रसाद जवेगु, केशरबहादुर लिम्बु, सुवर्ण शाक्य, सेहांग नेम्बाङ र सुरेन्द्र ठाकुर चयन भएका छन् । निर्वाचन समिति संयोजकमा समाजकी सल्लाहकार पार्वतीथापा मगर एवं सदस्य सशांक लामा र लिका सिंगक थिए ।
नेपाललाई सफल पार्न भूमिका खेल्छौं
अध्यक्ष, नेपाली संघीय समाज अमेरिका
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको भातृ संस्थाको रुपमा नेपाली संघीय समाज अमेरिकाको स्थापना गरेका हौं । यो एक गैर नाफामुलक संस्थाको रुपमा अमेरिकी कानुन अनुसार दर्ता भएको छ । प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीको उपस्थितीमा आइतबार संस्थाको दोस्रो महाधिवेसन सम्पन्नभयो । हामी विदेशमा रहे पनि मुलुकको राजनीतिक अवस्थाप्र्रति जागरुक नै रहन्छौं । र, त्यो किनपनि आवश्यक छ भने हामी सबै नेपालमा स्थायित्व र विकासको कामना गरेर बसेका छौं । बिभिन्न राजनीतिक व्यवस्था हुदै अहिले संघीय संरचना सहितको संविधानभने पनि कतिपय पक्षहरु राज्यसग खुसी हुन सकि रहेका छैनन् । यो किनभयो ? राजनीतिले कुन गति लिई रहेको छ त ? भन्ने बिषयमा हामी बाहिर बसेकाहरुले पनि जानकारी राख्न अति जरुरी हुन्छ ।
हामी विदेशीनुको मुल कारण भनेको नेपालको राजनीतिक र आर्थिक दुरावस्था नै हो । यदि नेपालको वातावरणमा सुधार आयो र सम्बृद्धिको बाटोमा लाग्यो भने हामीयता बसि रहेका व्यक्तिहरु पनिफर्किने अवस्था आउछ भन्ने लाग्छ । त्यसैले यहा रहेका नेपालीहरुमा पनि मुलुकको अवस्थाबारे जानकारी आदान प्रदान गर्ने एवं नेपालमा सक्रिय राजनीतिकदलहरुलाई पनि सकारात्मक एवं समावेशी लोकतन्त्रका लागि दवाव दिने नै हाम्रो मुल उद्देश्य हो ।
नेपालमा भर्खरै संघियता सुरु भएको छ । हामी संघीयताको उत्कृष्ट अभ्यास भएको मुलुक अमेरिकामा बस्छौं । यहा संघीयताले कसरी कसरी सकारात्मक ढंगले काम गरेको छ, जनताले कसरी सेवा पाएका छन्, राज्यलाई कर बुझाएका छन् जस्ता बिषयमा हामी हाम्रो मातृ दलमार्फत राज्यलाई जानकारी समेत प्रवाह गर्छौं । यसले अन्तत्वगोत्वा नेपालको सम्मृद्दि यात्रामा सकारात्मक योगदान दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।